SPC Composite Floor Extrusion Mutsara - China SPC Composite Floor Extrusion Line Mutengesi, Factory -Jwell
SPC rinoumba uriri iri extruded ne PVC chawo zvinhu izvo kuwana kuburikidza mana chinotenderera calender muchina, uye laminated pamwe PVC ruvara firimu, PVC akapfeka rukoko uye PVC yepasi Kamudzira neimwe-nguva, muitiro iri nyore, kupedza lamination nokupisa uye pasina guruu .
1, Isina mvura, hunyoro-chiratidzo. Rinonyatso gadzirisa dambudziko rekuti zvigadzirwa zvehuni zviri nyore kuora uye kuzvimba mushure mekunyorova uye kunyorova munzvimbo ine hunyoro uye ine mvura yakawanda, uye inogona kushandiswa munzvimbo isina zvigadzirwa zvehuni zvechinyakare.
2, Inopenya, akasiyana siyana mavara kusarudza kubva, ine zvese zvakasikwa huni magadzirirwo uye matanda magadzirirwo, uye inogona kuve akagadziriswa zvinoenderana neako wega hunhu.
3, High kwezvakatipoteredza kuchengetedzwa, hapana kusvibiswa, uye inogona zvishandiswezve. Chigadzirwa hachina benzene uye formaldehyde. Icho chigadzirwa chakatikomberedza chinogona kugadziriswazve uye chinoponesa zvakanyanya kushandiswa kwehuni.
4, High moto kuramba, inogona kunyatsoita murazvo unodzora, moto chiyero inosvika B1 nhanho, kuzvidzimisa-kudzima kana moto, haugadzi chero huturu gasi.
5, iyo yekuisa iri nyore, iko kuvaka kuri nyore, hapana yakaoma nzira yekuvaka inodikanwa, uye iyo yekumisikidza nguva nemutengo zvinochengetwa.
6, Hapana kutsemuka, hapana kuwedzera, hapana kushanduka, hapana kugadzirisa uye kugadzirisa, nyore kuchenesa, kuchengetedza post-kugadzirisa uye kugadzirisa mitengo